Dan Duran – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Time Traveler’s Wife (2009) Unicode အချိန်တွေနောက်ပြန်သွားလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့လူတွေ…… အချိန်တော့နောက်ပြန်လှည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာကို ရောက်သွားမယ်မှန်းမသိ၊ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေရှိလာခဲ့ရင်တောင် ဘာမှပြင်လို့မရဘဲ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ထပ်တလဲလဲ အချိန်တွေနောက်ပြန်လှည့်ပြီး မြင်နေရရင်ရော????အချိန်ခရီးသွားလို့ရတာကောင်းပါဦးမလား…….ဒီဇာတ်ကားထဲက မင်းသားရဲ့အနေထားကတော့ အဲလိုပါ။သူ့အမေကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်တာကိုလဲ အခါခါပြန်မြင်နေရပေမယ့် ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘဲ ကြည့်နေရတဲ့ အမေချစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို အမြဲခံစားနေခဲ့ရတာပါ။ သူ့အတွက်တော့ အချိန်ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ကျိန်စာတစ်ခုလိုပါပဲ။နောက်ပြီးဘာမှန်းမသိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်မှန်းမသိတဲ့နေရာကို အလိုအလျောက်ပျောက်သွားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ချစ်လာခဲ့ပြီး လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကရော ဘယ်လောက်ထိသာယာချမ်းမြေ့နိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့ ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအရာရာကို ကျော်ဖြတ်ရဲခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးအတွက် သူ့ယောက်ျားရဲ့ကျိန်စာက အမြဲတမ်းတော့ကျိန်စာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သာမာန်လူတွေနဲ့မတူပေမဲ့လဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဇနီးမယားပေါ် တာဝန်ကျေချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားပေးခဲ့ပုံတွေကို တွေ့မြင်ရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲကြိုးစားပေမဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါ သာမာန်မိန်းမတစ်ယောက်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရချင်မိတဲ့ အချိန်ခရီးသွားတစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမဘဝက ဘယ်လောက်ထိကြေကွဲစရာကောင်းလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးက မိမိရရရိုက်ပြထားတာဖြစ်လို့ လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ Credit Review Zawgyi အခ်ိန္ေတြေနာက္ျပန္သြားလို႔ရရင္ ေကာင္းမွာပဲဆိုတဲ့လူေတြ…… အခ်ိန္ေတာ့ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ရတယ္ဒါေပမဲ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာဘယ္ေနရာကို ေရာက္သြားမယ္မွန္းမသိ၊ ဝမ္းနည္းစရာအျဖစ္အပ်က္ေတြရွိလာခဲ့ရင္ေတာင္ ဘာမွျပင္လို႔မရဘဲ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ထပ္တလဲလဲ အခ်ိန္ေတြေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး ျမင္ေနရရင္ေရာ????အခ်ိန္ခရီးသြားလို႔ရတာေကာင္းပါဦးမလား…….ဒီဇာတ္ကားထဲက မင္းသားရဲ႕အေနထားကေတာ့ ...
IMDB: 7.1/10 141892 votes
Saw VI (2009) ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ SAW VI ကိုဆက္လက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ James Wan ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ေၾကာက္လန႔္ေစတဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူနဲ႔ Leigh Wannell တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက မက္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ဆိုးေတြပါလို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ Credit Review
IMDB: 6.0/10 92,100 votes